Momba anay | Shenzhen Speedy Technology Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 2003, ny orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny fanamboarana ny FANS mangatsiaka isan-karazany mampiasa an'io 200 mpiasa, ny toeram-pivarotanay dia mandrakotra faritra 8000 metatra toradroa miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra isan-taona manodidina ny 6000KPCS. Izahay dia manolo-tena amin'ny fampandrosoana, famokarana ary fivarotana fahombiazana avo lenta, kalitao azo antoka ary ny vidin'ny fifaninanana amin'ny mpanjifa rehetra.
Manana marika "Speedy" sy "Coolerwinner", mpankafy Speedy dia be mpampiasa amin'ny faritra misy rivotra sy mafana, toy ny faritra IT, fitaovana fanatanjahan-tena, rafitry ny rivotra, milina fantson-tsolika, herinaratra, fitaovana elektrika sy fitaovana elektrika, fitaovana milina sns. .
Speedy dia manana ekipa R&D matanjaka, feno fitaovana sy fitaovana fandrefesana matihanina isan-karazany izahay, toa ny Wind Tunnel, Auto Balancer, Ball Bear Tester, Noise Tester, Short Spray Testing, Inter turn short circuit test, Vibration test, High- Fitsapana hafanana ambany sns. Nahavita nanatsara ny tenanay izahay mba hanomezana fahafaham-po ny fangatahana tsena fitsikerana indrindra. Ny vokatray dia nandalo fanamarinana fiarovana iraisam-pirenena amin'ny firenena sy faritra maro toa ny: UL, CUL, TUV, CE, CCC, IP55, ROHS, sns.
Mba hihaonana amin'ny filan'ny fampandrosoana vaovao dia manome vokatra tsara sy milamina ho an'ny mpanjifa rehetra, nanangana ny "Injenierement moulding injection" izahay izay manana milina famolavolana tsindrona 8, 1 EDM ary milina CNC hafa ho an'ny famolavolana koronosy. Azo omena serivisy namboarina.
Ny fifehezana kalitao sy ny fampandrosoana ny vokatra no fototry ny maodelin'ny orinasa Speedy. Speedy dia mihaino hatrany ny mpanjifany amin'ny fampandrosoana hatrany, fanavaozana ary famolavolana vokatra vaovao. Vonona foana izahay hanome ny vahaolana mangatsiaka tsara indrindra ho an'ny mpanjifa rehetra. Manantena izahay fa ny fahombiazana avo lenta, ny fotoana fitarihana fohy, ny serivisy kalitao, ny kalitao azo antoka ary ny vidin'ny fifaninanana dia hanome fahafaham-po ny filanao.
Miarahaba anao rehetra hitsidika ny orinasanay hahazoana fahatakarana tsara kokoa.
12cm Ac Axial Fan, Metal Fan Guard, 172mm Ac Axial Fan, Hvac Fan Puller, Guard Fan Plastika, Metal Grill Fan 80mm Guard,